Aluminum mma nkwọ, Pcd mma nkwọ, Diamond mma nkwọ - Kenait
Ekwentị: +86 13924558963
Aluminum mma nkwọ
PCD Polycrystalline Diamond mma nkwọ
Foshan Kenait Ịcha Ngwá Ọrụ Co., Ltd. bụ ọkachamara emeputa nke ike alloy okirikiri ikwo pupụtara. Anyị na-emepụta okirikiri ikwo pupụtara na elu-edu mma nkwọ mmepụta akụrụngwa, Luxembourg tara alloy na German 75crL ígwè efere na ndị ọzọ na-elu-edu ihe onwunwe. Kenait tumadi na-arụpụta hụrụ pupụtara, aluminum ọnwụ hụrụ pupụtara, ígwè ọnwụ hụrụ pupụtara, multi-agụba mma nkwọ, ike osisi ọnwụ hụrụ pupụtara, plywood ọnwụ hụrụ pupụtara, metal ọnwụ hụrụ pupụtara, acrylic ọnwụ hụrụ pupụtara na-abụghị ọkọlọtọ hụrụ pupụtara, nke na-ọtụtụ-eji ngwá ụlọ, aluminum na ngwaike ụlọ ọrụ.
24-40 Ngwá Ọrụ
PCD Polycrystalline Diamond mma nkwọ 305-600Di ...
PCD Polycrystalline Diamond mma nkwọ 300-450Di ...
PCD Polycrystalline Diamond mma nkwọ 150-200Di ...
Aluminum mma nkwọ 16inch 405X3.5X25.4X80T
Aluminum mma nkwọ 14inch 355X3.2X25.4X80T
Aluminum mma nkwọ 12inch 305X3.2X25.4X80T
Kenait aluminum hụrụ pupụtara na-mere site imported aluminum, nke bụ inogide na na elu arụmọrụ. All anyị ngwaahịa na-emepụta site hụrụ ọnwụ na-egbu maramara na brushless. Ngwa: ụzọ, window, ákwà mgbochi mgbidi aluminum, aluminum mkpanaka, aluminum panel, ulo oru aluminum, ultra-mkpa aluminum, aluminum ngwá ụlọ, okpomọkụ sink na na.
Woodworking mma nkwọ
Kenait woodworking hụrụ pupụtara na-mere site elu-edu alloy na isi, nke nwere atụmatụ nke elu ọnwụ nkenke, neatly bee, ezigbo ịkpụ, ala ụzụ na ogologo ndụ oge. Ngwa: akọrọ okwuchi, ike osisi, MDF, plywood, osisi dabeere panel, ogwe nke dị iche iche ihe onwunwe na achara na ngwaahịa.
Njikere ike gị ọhụrụ Haas vetikal na nkume igwe nri?
Ka anyị chọta ezi igwe n'ihi gị ahịa, na-eme ka ọ na gị onwe gị site na-agbakwụnye na nhọrọ na atụmatụ na-arụ ọrụ gị.
Woodworking Tct Circular Saw Blade, Wood Cutting Saw Blade, Saw Blade Cutting Aluminum, Aluminum mma nkwọ,
Adress: Nke 2, Industrial Road, Bijiang Industrial Mpaghara, Beijiao Town, Shunde District, Foshan, Guangdong, China